Ide ederede ọdịnaya nke na-atọghata maka azụmahịa | Martech Zone
Fraịdee, Nọvemba 8, 2019 Fraịdee, Nọvemba 8, 2019 Douglas Karr
Ọ na-eju m anya mgbe m gụrụ otu akụkọ dị ịtụnanya na saịtị ma ọ bụ blog nke mmadụ, mana enweghị m onye m ga-amata, ihe kpatara m ga-eji soro ha rụọ ọrụ, ndị ha na-ejere ozi, ma ọ bụ ihe ha tụrụ anya ka m mee na saịtị ahụ. Ka ị na-etinye ego
Ọdịnaya nke emegoro nke ọma chọrọ nnukwu ego na nyocha, ihe eji ederede, eserese, yana nkwalite. Ọ bụrụ na m rutere na edemede gị nke na-ewulite ntụkwasị obi na ikike na m na isiokwu m na-eme nyocha… ị na-enyere m aka ịghọta ihe ndị ọzọ ga-eme iji soro gị ma ọ bụ ụlọ ọrụ gị?
O nwere ike ịbụ na ị hụla ụfụ m video na aka, ya mere ịmara mmetụta m na-enwe banyere otu esi akọwa okwu ahụ aghara aghara. Anaghị m ekwu na mpempe ọdịnaya ọ bụla ị wepụtara ga-abụrịrị nke a na-enyo enyo na metric metric, ọ bụ ezie na nke ahụ ga-adị mma. Ma… mgbe ị na-agbali iduzi onye na-agụ ya site na nyocha gị na ebumnuche azụmaahịa n'uche… echefula itinye n'ezie ihe ndị dị mkpa, igodo, ma ọ bụ ịkpọ oku iji nyere ha aka ịghọta ihe ndị ọzọ ga-eme ha nwere ike were!
Isi ihe na-eweta ọdịnaya bụ ịmata nzube ya. Ọ bụrụ na ị na-ebipụta ọdịnaya naanị ka ịdebe blọọgụ gị ka ọ na-arụ ọrụ ma na-agbaso oge, ị na-aghọta isi ihe niile. Ikwesiri ịmepụta ọdịnaya maka nzube nke iru ihe mgbaru ọsọ a kapịrị ọnụ n'oge usoro mmepe.
Joseph Simborio, Onye na-atụgharị uche
Na ozi infographic a site na Spiralytics, Ọdịnaya Mgbaru Ọsọ: Otu esi emepụta ọdịnaya maka njikọ, Njikọ, ma ọ bụ mgbanwe, ha na-enye usoro dị mfe iji hụ na ọdịnaya gị nwere ike inyefe ego ya. Ndakpọ ihe mgbaru ọsọ dị mfe ma dị nkọ:
Ọdịnaya nke njikọ aka - Ọdịnaya bụ ihe na-eme ka ndị mmadụ gaa na ebe nrụọrụ weebụ gị. Mana site na imepụta ihe dị n'ịntanetị yana mgbanwe Google nke algorithm mgbe niile, ogo ọdịnaya na uru ga-abụ isi kacha mkpa. Ọ bụrụ na ọdịnaya gị dị mma, ọ kwesịrị itinye aka. Ma ọ bụrụ na ọ na-ekere òkè, tụọ anya ka okporo ụzọ bawanye.
Ọdịnaya maka Links - Nchọgharị ọchụchọ na-eji njikọ dị ka mgbaama ntụkwasị obi na algorithm ha ebe ọ bụ na ndị mmadụ na-ejikọ njikọ ndị ọzọ na ndị ọchịchị tụkwasịrị obi na ntanetị, nke na-enyekwa aka na-emetụta ọkwa ọchụchọ. Ebe nrụọrụ ikike nwere nnukwu ndị na-ege ntị na ọhụụ, na-eme ka ọ dị mfe ịnweta njikọ. N'ezie, 21 percent nke algorithm ogo Google dabere na njirimara ikike njikọ ma ọ bụ ọnụ ọgụgụ nke njikọ na ngalaba.
Ọdịnaya maka mgbanwe - Ebumnuche gị dị ka azụmahịa bụ ime ka atụmanya gị ghọọ ntụgharị mgbanwe bara uru, yabụ na ọdịnaya gị kwesịrị ịkpali ndị na-ege ntị ma mee ka ha mee ihe. Nke a ga - eme ka ndị ọbịa gị bụrụ ndu, duga ndị ahịa, na ndị ahịa n’ime ndị na - akwado akara.
Lelee zuru ezu infographic ebe a, na na na pịa site na-agụ Jim si isiokwu na ya entirety maka ụfọdụ oké zuru ezu!
Tags: kpọọ n'omumecontent Marketing
Mgbasa ozi: Jikọọ, Jikwaa, ma nyochaa Data Ahịa Gị